မင်းတပ်သို့ရောက်ရှိနေသောUNHCRယာဉ်တန်းကိုစစ်တပ်ကအကန့်အသတ်ဖြင့်သာခွင့်ပြု - Myanmar Pressphoto Agency
AID ChinState Mindat MPA News UNHCR
IDP July 19, 2021 ·0Comment
ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့သို့အကူအညီများပေးရန်ရောက်ရှိနေသည့်UNHCR (The UN RefugeAgency )၏ အကူအညီပေးရေးယာဉ်တန်းကို စစ်တပ်ကအကန့်အသတ်ဖြင့်သာခွင့်ပြုထားကြောင်းသိရသည်.
“နိုင်ငံခြားသားကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူး။ အခုရောက်နေတဲ့သူတွေ အကူအညီသွားပေးမယ့်သူတွေက UNHCRကမြန်မာအရာရှိတွေပဲပါတယ်။ ပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုထွက်ခွင့်မပြုဘူး” ဟု မင်းတပ်မြို့မှအမည်မဖော်လိုသူတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကMPAသို့ပြောသည်။
UNHCR၏ အကူအညီပေးရေးယာဥ်တန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူဇော်မင်းထွန်းထံသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ UNHCRအနေဖြင့် ၆ဘီးကားတစ်စီးနှင့် ၁၂ဘီးကားတစ်စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပါဝင်လာကြောင်းသိရသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် တကိုယ်ရေသုံး အကာအကွယ် ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင် အစားအစာမဟုတ်သည့် ပစ္စည်းများအနက်မှ တာပေါ်လင်များ၊ ခြင်ထောင်များ၊ ဖျာများ၊ စောင်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မီးအိမ်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ဖြန့်ဖြူးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း UNHCRက ၎င်းတို့၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ကြေငြာထားသည်။
UNHCRအနေဖြင့် လှူဒါန်းမှုများကို ဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၅,၀၀၀ခန့်ကို ရက်သတ္တပတ်လုံးလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပြီး မည့်သည့်နေရာများသို့အဓိကထားလှူဒါန်းသွားမည်ကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။
မင်းတပ်မြို့နယ်တွင် ဧပြီလတတိယအပတ်မှစတင်ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲများအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြည်သူအများအပြား နေရပ်စွန့်ခွါပြီး စစ်ရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
#UNHCR #မင်းတပ် #ချင်ပြည်နယ် #အကူအညီ #MPA
CDF-Mindat Cleaned Up Over 200 Terrorist Military Soldiers in 45 Days
More than 20 clashes broke out in Mindat town of Chin State between the terrorist military and CDF-Mindat and more than 200 military soldiers were killed, Mindat People’s Administration reports.
It was reported that more than 200 soldiers were killed and more than6military trucks were burnt down in over 20 clashes from April 24 to June 8 (45 days) in Mindat.
The beginning of intense fightings was when those who were putting up “We Support NUG” posters in protest were arrested and shot innocent people.
With the military facingahigh number of casualties, 24 CDF-Mindat comrades sacrificed their lives for the nation as well. The terrorist military used large-scale damaging weapons when fighting against the local defense forces.
Since the military coup in Myanmar, the people have formed armed resistance in villages to protect themselves from dangers of the military.